Literary Crowfunding: Crowdfunding muMabhuku. | Zvazvino Zvinyorwa
Literary Crowfunding: Crowdfunding inosvika mabhuku akabatana pamwe nehunyanzvi hutsva.
Ana Lena Rivera Munoz | | Dhijitari nyika
Literary crowdfunding: vanotsigira vanyori vanoda kutsigira chirongwa chavo.
Mabhuku ekutsvagisa mari, inozivikanwawo seyakawanda mari, iyo isiri kana yakaderera pane a mari yekuunganidza kuburikidza neinternet nechikamu che munyori kutsikisa bhuku rake uye vanopa kana madiki-gumi vanozopihwa kopi painoburitswa.
Kune akawanda marudzi e crowfundig: kune vezvemabhizimusi uko mune ekudzosera masheya, mabhenefiti, nezvimwe zvinogamuchirwa ..., yemubatanidzwa mapurojekiti, kuvaka dzimba, mari zvematongerwo enyika mushandirapamwe ... kune zvese zvingafungidzirwe uyezve mune ese tsika masango anopfuura mabhuku : cinema, mumhanzi, nezvimwe ...
1 Kwakatangira Crowfunding.
2 Ko Crowfunding inoshanda sei?
3 Zvinyorwa zvinyorwa zvekubhadhara mari.
4 Chiitiko chaicho.
4.1 Nei Crowfunding?
4.2 Ruzivo rwako pachako rwave sei?
4.3 Zvinotarisirwa nebhuku.
4.4 Ucharamba uchiedza kuita kuti muparidzi ataridzwe here?
Kunyangwe crowfunding iri izwi reAnglo-Saxon iro rinomuka nekuda kwenzvimbo dzeinternet dzinozvarwa kupa rutsigiro rwetekinoroji kune iyi nyowani yemari, harisi zano nyowani: muna 1989 veSpanish rock group Extremoduro vakapa mari yavo yekutanga albam kuburikidza necrowfunding. Hapana chikuva chekutora, ehe.
Kubva mugore ra2000 vanotanga kuzvizivisa digital platforms izvo zvinokutendera iwe kuti upe chirongwa uye kumbira mari kubva kuvashandisi veInternet mune zvese, kuzadzikisa kutendeseka nekuda kwenzvimbo dzekudyidzana izvo kusvika parizvino zvaisakwanisika.
Ko Crowfunding inoshanda sei?
Mushandirapamwe wekubhadhara mari vanhu unowanzo kuve nezvinhu zvitatu.
Chirongwa izvo zvinokumbirwa mupiro wezvehupfumi (uine hushoma pamunhu anopa).
Chinangwa chehupfumi Zvekutora.
Kana chinangwa chezvehupfumi chisingawanikwe mukati medu nguva, mipiro haina kuitwa. Kana zvikawanikwa, iyo diki-gumi inogamuchira chimwe chinhu nekudzoka. Panyaya yekunyorwa kwekutsvagisa mari, kopi yebhuku parinoburitswa.
Zvinyorwa zvinyorwa zvekubhadhara mari.
Zvinyorwa zvinyorwa zvekushandisa mari hunyanzvi hutsva kuzadzisa chinyakare kana dijitari kuburitswa kwebhuku, kupi mupepeti basa inowanzoitwa ne co-kutsikisa muparidzi izvo zvinobatsira munyori kuronga mushandirapamwe wekutsvaga mari kana, mune mashoma ezviitiko, kuti azviwanire-kuzvishambadzira uko basa rinoitwa nechinyorwa munyori pachake. Muzviitiko zvese izvi bhuku rinotsigirwa nema microsites chidimbu kana kukwana.
Munzvimbo ino, zviitiko zvakasiyana kwazvo pakati pevanyori vakambozviedza.
Dambudziko hombe revanyori nderekuti kazhinji kuwanda kwemari inounganidza mari yekuburitswa kwebasa, iyo dzimwe nguva inowanikwa uye dzimwe nguva kwete, asi kwete inounganidzwa kuzivisa bhuku racho yakamboburitswa chii kunoderedza zvakanyanya mikana kupararira kune huwandu hwakawanda hwevaverengi. Izvo hazvigoneke sezvakaratidzwa mune dzakasiyana zviitiko zvekuzvitsikisa-asi, asi zvakanyanya kuoma.
Domingo Alberto Martinez Iye munyori, blogger (https://lahogueradeloslibros.wordpress.com/) uye ex-bookstore.
Nemanoveli maviri kuchikwereti chake uye nenyaya dzinoverengeka pfupi, dzese dzakaburitsa nekuda kwekuti vaive vakundi vezvinyorwa zvemabhadharo avo muripo waikosha kuburitswa, kunyangwe dai vaive mapfupi-mapfupi uye mapfupi-renji, akatsvaga nzira kutsikisa anthology yenyaya dzakanzi Mhembwe munzira uye zvakave zvakagadziriswa nechaunga mari kuburikidza nekambani-yekutsikisa masevhisi kambani.
Domingo Alberto: Chaichoicho crowfunding chiitiko.
Mumhinduro ina anopfupikisa ruzivo rwake neino nzira nzira yekubhadhara bhuku.
Nokuti nhasi zvakaoma kwazvo kutsikisa chimwe chinhu kana pasina munhu anokuziva iwe, kana iwe uchingonyora usina vateveri vegazillion pane ese marudzi enetiweki kana kana iwe ukasanyora izvo izvo vaparidzi zvavanofunga kuti zvinotengeswa. Iyo indasitiri yekutsikisa ndeyekuti, indasitiri. Iwo madiki anozadzwa nemazana ezvisina kukumbirwa mavambo kubva kune vanyori vakarambwa nevashambadzi vakuru; uye nepanorama yakadaro, chokwadi ndechekuti iyo sarudzo yekutsikisa usina kukwenya homwe yako yakaoma kwazvo. Iwe wakasara uine sarudzo yevanoparidza venhema, ayo achiri maprinta ane rimwe zita, vanokukumbira mari yekutsikisa uye ipapo ndipo paunokwanisa kushambadzira bhuku racho. Ndine vana vaviri vadiki uye mogeji, uye handina yakakwana yekubhadhara yekushambadzira kwekuuya.
Ruzivo rwako pachako rwave sei?
Kuvandudza, asi kana iwe ukabvunza kana ini ndaizozvipfuurirazve, hazvife zvakataurwa nezvemvura iyi handinwe, asi panguva ino, kwete. Mushandirapamwe wekubhadhara mari wakaita segwirikwiti, unofanirwa kuupfuudza pane imwe nguva. Mavhiki matatu ekutanga aive akaoma chaizvo, nekuti mushandirapamwe wakafambira mberi zvishoma nezvishoma. Unopedza mazuva acho kukumbira rubatsiro, kuwana magonhi achirohwa, kuverenga uye kuona kuti hausi kuzosvika; Y pakarepo, nerimwe zuva, mushandirapamwe unotanga kushanda. Vhiki rapfuura raive rakaita senge rwendo rwekukunda, nekuda kwevanhu vese avo vakatsigira chirongwa changu uye vakatsaurira maminetsi mashoma ehupenyu hwavo kuti vatenge bhuku rangu. Vanenge vanhu zana nemakumi matatu… uye ndinogona kukuvimbisa kuti handina shamwari dzakawanda kudaro.
Handina kunyanyisa, chokwadi. Ini handisi munhu anoda chinzvimbo. Iyo yega iyoyo aida yaive yekuburitsa bhuku rangu, iro nyaya dzangu dzakava dzepanyama, kwete mune mashoma mafaera pakombuta, uye kuti vanhu vanogona kuaverenga uye vondipa maonero avo. Ini handisi kutsvaga mukurumbira. Ndinoda, hongu, kuti ndiwane boka revaverengi vakavimbika, vanokoshesa zvandinonyora uye vondiudza kubva pamoyo kana vachida kana kwete.
Kana zviri zvekuparadzira, paive nechitoro chemabhuku panguva yemushandirapamwe yakanditsigira muTudela, guta rangu, rinova ndiro randakabvuma kupa basa iri.
Ucharamba uchiedza kuita kuti muparidzi ataridzwe here?
Munguva yepakati nepakati iyo ndiyo iyo chinangwa. Kugona kushanda nemuparidzi wechivanhu anovimba nebasa rako uye iyo yaunogona kushambadzira nguva zhinji usingatombofaniri kuita juggle. Isu tese tinoda kushambadza naAnagrama kana Alfaguara, hongu; Asi sezviri chikamu ichi, ndiri kugutsikana neyakaipisisa imba yekutsikisa iyo yandinogona kutengesa mabhuku angu muTudela nenzvimbo dzakapoterera. Zvimwe zvese inyaya yemukadzi wemukaka, uye ini ndatova nemakore makumi mana ekuenda kunofungidzira ... kunze kwenyaya dzangu, hongu.
Nhanho yakanaka kuna Domingo uye kune vese vanyori vanoona kuwanda kwevanhu mari sarudzo yemabasa avo kuti vaone mwenje.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Dhijitari nyika » Literary Crowfunding: Crowdfunding inosvika mabhuku akabatana pamwe nehunyanzvi hutsva.